Cishe wonke umuntu umsebenzi abawuthandayo. Abesilisa hamba ngokudoba, ukuzingela noma nginyamalale izinsuku egalaji. Abesifazane uvakashele ubuhle salon, bethengela, uthunge cross, ukunitha izingubo, shawls, ukunitha noma ukukhilosha napkins. Ake sicabangele wokuzilibazisa, efana ukunitha.
Ukwaluka upholisa izinzwa (inqobo une konke kuvela). Ungakha yobuciko yangempela yezandla zabo. Lo msebenzi akudingi ukutshalwa ezinkulu. Okudingayo - kuyinto ngentambo namathuluzi ukunitha.
Crochet ihlukaniswe yaba ezintathu izinhlobo, kuncike ithuluzi:
Ukwaluka. Iza phambi wemasayizi izinhlobo - usayizi ukushuba. Kube izinaliti camera futhi ngaphandle kwalo (isib Teflon inikeza kangcono intambo ngokuhambisa). Babuye ihlukaniswe ngokwenjongo - ngokwesibonelo, amasokisi, isiyingi (ukunitha isiyingi ukhiqiza ingubo Seamless).
Ijezi typewriter mechanical noma kagesi. Kwakuvamise lokhu imishini ukuze kusheshiswe umsebenzi umsebenzi, kodwa akukuniki isinqumo esinjalo ebanzi amaphethini, njengasezulwini ukunitha ngesandla.
Ukukhilosha. Izingwegwe zihlukaniswa ngobukhulu impahla zenziwa lapho. Metal ngaphezulu eziqinile, kodwa kakhulu esingaphansi ekhiqizwa kusuka plastic.
izingwegwe Plastic makhulu (isibonelo, i-ijezi ngentambo obukhulu), kodwa abaqiniseki okunokwethenjelwa (ngokuvamile ngobugebengu).
Ukwaluka lithole isibhebhetheke kakhulu kunalokhu ukusetshenziswa hook. Beginners kufanele kuqala kahle efekethisiwe ukunitha futhi nokunwebeka (isiNgisi nesiFulentshi), bese ungazama ukudala napkin izinaliti noma ezinye into encane. Kulesi sikhathi kubalulekile ukuba uhlale isikhathi eside.
Kufaka izinto lapho lokhu okwenzeka ngayo ichazwe imininingwane nezincwadi inthanethi ukunitha indwangu ukunitha izinaliti Wabasaqalayo. Lapho ungathola lonke ulwazi ngalokho amathuluzi okudingayo nentambo. Ngokwami exhunywe spokes napkins Uyi umhlobiso enhle ekhaya lakho futhi izipho ezinkulu abangane nabathandekayo.
Emva kokuthola Okuhlangenwe nakho kwami kokuqala ukunitha, ungakwazi udlulele imiklamo eyinkimbinkimbi kakhulu imikhiqizo. Qala ngezinto ezincane futhi kancane kancane balukhulume ukuqaliswa ezinkudlwana nokuningi okhandlayo. Noma yimuphi iphethini eziyinkimbinkimbi ihembe lakhe inzuzo ukugcizelela ukuphikelela yakho kanye nekhono ukudala izingubo okukhethekile futhi original. Ijezi izingubo zezingane kungcono ukusebenzisa ngendlela nekhono. Lokhu kuzovimbela yizindawo isikhumba ezivuzayo zezingane, futhi umntwana kuyoba ukhululekile futhi efudumele. indlela Seamless elisetshenziswa ukunitha amakepisi, berets futhi imikhono izingubo, ibhulukwe zezingane. Linikeza hhayi induduzo kuphela uma egqoke izingubo, kodwa futhi eyigeza komkhiqizo.
Kunoma yini oyenzayo - indwangu obumbene, umsebenzi womfekethisi cross, waya kwelinye ukudoba - khumbula ukuthi izinto enizithandayo ozithandayo kufanele ibe mnandi. Futhi uma enizithandayo kukunika hhayi kuphela ukwaneliseka, kodwa futhi inzuzo enkulu, kungcono kabili njengoba nice.
Openwork ingubo, crocheted
Indlela ukukhetha kwesokudla ingubo ihlobo ngoba abesifazane emikhulu? Ukukhetha imodeli kwesokudla
Beautiful Bolero (hook) isikimu kanye nencazelo
Imisho ihomonimi ngesiNgisi nezinhlobo zabo
Ukukhetha Ukuthwala Baby
Ukwa sokukhubazeka komgogodla. emgogodleni ukwelashwa ukwa. Usizo lokuqala, ukuhlinzwa, ukuvuselelwa